မြေငလျင် တိုင်တာနည်း ပေကြိုး – Richter Scale | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » မြေငလျင် တိုင်တာနည်း ပေကြိုး – Richter Scale
မြေငလျင် တိုင်တာနည်း ပေကြိုး – Richter Scale
Posted by Kyaemon on Dec 2, 2012 in Education, Know-How, DIY, Science & Religion, Sciences & Resources, Think Tank |4comments
ပိုပြီးပေါ်လွင်အောင် ငလျင်ကို “မီး” နဲ့ဘဲအရင်နှိုင်းရမှာပါ၊
ရွာထိပ်မှာ “မီး မီး” လို့ အသံကုန်အော်လိုက်ရင်၊
မပြေးနိုင် မရပ်နိုင် ဖြစ်လာတော့တာ၊
အဲဒီလို ခံစားခဲ့ ကြုံခဲ့ကြဘူးမှာပါ၊
ရန်သူမျိုး ငါးပါးထဲမှာ”မီး”ရန် က ရန်သူတပါးအဖြစ်ပါဝင်တာလို့
“သူခိုး” ရန် ဟာ ရန်သူမျိုးငါးပါး ထဲက နောက်တပါးဖြစ်ပေမယ်လို့၊
“သူခိုး”ဲက ခိုးရင် ပစ်စည်းကျန်သေးတာ၊
မီးလောင်ရင် ပစ်စည်းတွေက အကုန်ပြောင်ပြီး မကျန်တော့တာကြောင့်
“မီးရန်” ကို ပိုဆိုးတာလို့ပြောကြတာ၊
“ငလျင် ငလျင်” လို့ အော်ဟစ်လိုက်ရင်လဲ
ဒါနဲ့ထူးဆန်းတာက “ငလျင်” ကို ရန်သူမျိုးငါးပါးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊
“ခြောက်ပါး” ဆိုပြီးတော့ “နောက်တိုး” ချဲ့ထွင်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်
တကယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ ငလျင် ပြင်း ငလျင်ကြီး ဟာ ဖြစ်”ခဲ” တာ၊
ဒီလိုနဲ့ဘဲ ငလျင်ကြောင့် သေကြေပျက်စီး
လူတိုင်းကစိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ကြတာဟာ သဘာဝ ပါ၊
မီးကိုကြောက်ပြီး မီးကိုမသုံး”ရဲ”ဘဲနေလို့ မ ရသလို၊
ရေကူး ဆက် မ သင်တော့ဘဲ
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေဘို့လဲ မ လိုပါ၊
အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကျောက်ခေတ်လိုနေ နေဘို့လဲ မ လိုပါ၊
ဘုရားဟောတာရှိတယ် မ ဟုတ်လား၊
ဒါကြောင့်မို့သူများက ငလျင် အကြောင်းကို
ဝါယမ စိုက်ထုတ်ပြီး လုံးဝ ရှာဖွေမပေးပါဘဲနဲ့
ဟိုအော် ဒီအော် ဟိုဖြဲချောက် ဒီဖြဲချောက်
အောက်တန်းကျတဲ့ ဟိုဆဲ ဒီဆဲ ယုံထင်ကြောင်ထင်လုပ် နေတာက
ခုဟာက ငလျင်ကိုဘယ်လို “တိုင်းတာ” ရတာလဲ ဆိုတာကို
မြေငလျင် တိုင်တာနည်းRichter Scale အတိုင်းအတာ “ချိန်ခွင်”/ ပေကြိုး
Richter အဆင့် ၁၀ ဆင့်ရှိပြီး၊ နောက်က တဆင့်ဟာရှေ့က တဆင့်ရဲ့ ဆယ်ဆ (ဆယ်လီ)Magnitude ထုထယ်ပမာဏ ရှိတာ၊
Richter ၂ အဆင့် ဟာ ၁ အဆင့် ရဲ့ဆယ် ဆ (၂ဆ မဟုတ်)
Richter ၃ အဆင့် ဟာ ၂ အဆင့် ရဲ့ဆယ် ဆ (တဆခွဲ မဟုတ်)
Richter ၃ အဆင့် ဟာ ၁ အဆင့် ရဲ့ အဆတစ်ရာ (၃ဆ မဟုတ်)
Richter ၄ အဆင့် ဟာ ၁ အဆင့် ရဲ့ အဆ တစ်ထောင်(၄ဆ မဟုတ်)
Richter ၇ အဆင့် ဟာ ၁ အဆင့် ရဲ့ အဆ တစ်သိန်း(၇ ဆ မဟုတ်)
***Population လူသူ နေထိုင်ရာဒေသ မှာဆိုရင်***
အဆင့် ၁ က ငလျင်ဟာ တမိနစ်ကိုတခါ လှုပ်တာ
အဆင့် ၂ က ငလျင်ဟာ တနာရီကိုတခါ လှုပ်တာ
အဆင့် ၃ က ငလျင်ဟာ တနေ့ကိုတခါ လှုပ်တာ
အဆင့် ၄ က ငလျင်ဟာ တပတ်ကိုတခါ လှုပ်တာ
(အဆင့် ၁ ကနေ အဆင့် ၃ ဟာ မြေကြီးရဲ့ရွေ့လျောလှုပ်ရှားမှု က ” သေးငယ် “ တာ)
အဆင့် ၄ ဟာ မြေကြီးရဲ့ရွေ့လျောလှုပ်ရှားမှု က အသင့်သင့်နဲ့လျှပ်တပြက် တခဏချင်း ဖြစ်တာ
အဆင့် ၅ က ငလျင်ဟာ ၁၀ နှစ် ကိုတခါ လှုပ်တာ
အဆင့် ၆ က ငလျင်ဟာ အနှစ် ၃၀ ကိုတခါ လှုပ်တာ
(အဆင့် ၅ ကနေ အဆင့် ၆ ဟာ မြေကြီးရဲ့ရွေ့လျောလှုပ်ရှားမှု က ကြီးပြီးတခဏချင်း ဖြစ်တာ)
အဆင့် ၇ ဟာ အနှစ် ၅၀ ကိုတခါ လှုပ်ကာ
(မြေကြီးရဲ့ရွေ့လျောလှုပ်ရှားမှု က ပြင်းထန် ပြီးတခဏချင်း ဖြစ်တာ )
အဆင့် ၈ ကနေ အဆင့် ၉ ဟာ နှစ် ၁၀၀ နဲ့ ၃၀၀ ကိုတခါစီလှုပ်ကြပြီး
မြေကြီးရဲ့ရွေ့လျောလှုပ်ရှားမှု က အလွန် ပြင်းထန်တာ
အဆင့် ၁၀ ဟာ နှစ် ၁၀၀၀ ကိုတခါလှုပ်”ခဲ” ပြီး
မြေကြီးရဲ့ရွေ့လျောလှုပ်ရှားမှု က အတိုင်းထက်အလွန် ပြင်းထန်တာ
File:Earthquake Richter Scale.jpg – Wikimedia Commons
Richter ရစ်တာ ၁ က magnitude ထုထယ်ပမာဏ ၁၀ [အခြေခံ ကိန်းဂဏန်း
logarithm ဂဏန်းသင်ချာအရ(ပင်မ ၁၀ )] ကို ဆိုလိုတာ
ရစ်တာ ၂ က magnitude ထုထယ်ပမာဏ ၁၀၀ ( တရာ)ကိုဆိုလိုတာ
ရစ်တာ ၇ ဆိုရင်magnitude ထုထယ်ပမာဏ ၁၀ သန်း ( တကုဋေ) ကိုဆိုလိုတာ
ရစ်တာ ၉ ဆိုရင် magnitude ထုထယ်ပမာဏ သန်း တထောင် (ကုဋေ တရာ) ကိုဆိုလိုတာ
Richter ၁ က ၁၀
Richter ၂ က ၁၀၀
Richter ၃ က ၁ ၀၀၀
Richter ၄ က ၁၀ ၀၀၀
Richter ၅ က ၁၀၀ ၀၀၀
Richter ၆ က ၁ ၀၀၀ ၀၀၀
Richter ၇ က ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀
Richter ၈ က ၁၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
Richter ၉ က ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
တီထွင်သူCharles Richter ရဲ့ပုံ
မြေငလျင်ကိုတိုင်းတာဘို့ဆိုရင် Richter Scale ရစ်တာပေကြိုးကိုဘဲသုံးတာကများတာပါ၊
ငလျင်အများစုရဲ့ Magnitude ထုထယ် ပမာဏကိုတိုင်းတာနိုင်ဘို့ ၁၉၃၄ မှာCharles Richterက
Richter Scaleရစ်တာချိန်ခွင် (ပေကြိုး) ကိုစတင်တီထွင်တာပါ၊
ငလျင် မျိုးစုံတို့ရဲ့ Wave လှိုင်းဂယက်ကဘယ်လိုဘဲ
နောက်တဆင့်ကရှေ့တဆင့်ထက်Magnitude လှိုင်းဂယက်ထုထယ်ပမာဏ (၁၀) ဆ ကြီးသော်လည်း၊
ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အင်အားက ရှေ့တဆင့် ထက် အင်အားပေါင်း (၃၂) ဆ ကိုထုတ်လွှတ်တာပါ၊
အဆင့် ၁ က TNT ယမ်းဘီလူး ၆ အောင်စ (ounces) အင်အားကိုထုတ်လွှတ်ပြီး၊
အဆင့် ၈ က TNT ယမ်းဘီလူး ၆ သန်း တန်ချိန်(tons) အင်အားကိုထုတ်လွှတ်တာ၊
ကံကောင်းလို့ဘဲ၊နှစ်စဉ်လှုပ်ခါတဲ့မြေငလျင်အများဆုံးတွေဟာ(၂.၅) အဆင့်နဲ့ အောက်တွေဖြစ်နေကြတာ၊
The Richter magnitude scale can be used to desribe earthquakes so small that they are expressed in negative numbers. The scale also has no upper limit, so it can describe earthquakes of unimaginable and (so far) unexperienced intensity, such as magnitude 10.0 and beyond.
Although Richter originally proposed this way of measuring an earthquake’s “size,” he only usedacertain type of seismograph and measured shallow earthquakes in Southern California. Scientists have now made other “magnitude” scales, all calibrated to Richter’s original method, to useavariety of seismographs and measure the depths of earthquakes of all sizes.
Here’satable describing the magnitudes of earthquakes, their effects, and the estimated number of those earthquakes that occur each year.
မြေငလျင်ကိုတိုင်းတဲ့ နောက်တနည်းက Mercalliချိန်ခွင်(ပေကြိုး)နည်းဖြစ်ပြီး၊
၁၉၀၂ မှာ Giuseppe Mercalli ကတီထွင်ခဲ့တာ၊
အပျက်အစီးတွေက များတာ နဲတာက၊
အဆောက်အအုံ အောက်ခံ မြေကြီးအမျိုးအစား
Different building designs hold up differently in an earthquake and the further you are from the earthquake, the less damage you’ll usually see. Whetherabuilding is built on solid rock or sand makesabig difference in how much damage it takes. Solid rock usually shakes less than sand, soabuilding built on top of solid rock shouldn’t be as damaged as it might if it was sitting onasandy lot.
၂.၅ အဆင့် မြေငလျင် မျိုးက တနှစ်ကို
အကြိမ် ၉၀၀၀၀၀ (၉ သိန်း) ကြိမ် လှုပ်ခါတာကို
၂.၅ မှ ၅.၄ အဆင့် မြေငလျင် မျိုးက တနှစ်ကို
အကြိမ် ၃၀၀၀၀ (၃သောင်း) ကြိမ် လှုပ်ခါတာကို
လူတွေက သိလိုက်တာ၊ အပျက်အစီး အနည်းငယ်ပါ၊
၅.၅ မှ ၆.၀ အဆင့် မြေငလျင် မျိုးက တနှစ်ကို
အကြိမ် ၅၀၀ (ငါးရာ) ကြိမ် လှုပ်ခါတာက
အဆောက်အဦးတွေ အပျက်အစီး အနည်းငယ်ပါ။
၆.၁ မှ ၆.၉ အဆင့် မြေငလျင် မျိုးက တနှစ်ကို
အကြိမ် ၁၀၀ (တစ်ရာ) ကြိမ် လှုပ်ခါတာက
လူအများအပြား ထူထပ်တဲ့ဒေသမှာအပျက်အစီး အများအပြားဖြစ်ပေါ်နိုင်တာပါ
၇.၀ မှ ၇.၉ အဆင့် မြေငလျင် မျိုးက တနှစ်ကို
အကြိမ် ၂၀ (နှစ်ဆယ်) လှုပ်ခါတာက
၈.၀ အဆင့်နဲ့အထက်မြေငလျင်မျိုးက ငါးနှစ်မှရှစ်နှစ်ကာလမှာ
In truth, however, our planet’s seemingly stable surface is made up of enormous pieces of rock that are slowly but constantly moving. Those pieces continually collide with and rub against one another, and sometimes their edges abruptly crack or slip and suddenly release huge amounts of pent-up energy. These unsettling events are called earthquakes, and small ones happen across the planet every day, without people even noticing. But every so often,abig earthquake occurs, and when that happens, the pulses of energy it releases, called seismic waves, can wreak almost unfathomable destruction and kill and injure many thousands of people [source: Bolt]…..
Though earthquakes have terrorized people since ancient times, it’s only been in the past 100 years that scientists have come to understand what causes them, and to develop technology to detect their origin and measure their magnitude. In addition, engineers and architects have worked to make buildings more resistant to earthquake shocks. Someday, researchers hope to findaway to predict earthquakes in advance, and perhaps even control them…..
Wheneveramajor earthquake is in the news, you’ll probably hear about its Richter scale rating. You might also hear about its Mercalli Scale rating, though this isn’t discussed as often. These two ratings describe the power of the earthquake from two different perspectives.
The most common standard of measurement for an earthquake is the Richter scale, developed in 1935 by Charles F. Richter of the California Institute of Technology. The Richter scale is used to rate the magnitude of an earthquake — the amount of energy it released. This is calculated using information gathered byaseismograph.
As we previously noted, most earthquakes are extremely small. A majority of quakes register less than3on the Richter scale; these tremors, called microquakes, aren’t even felt by humans.
၂.၀ အဆင့်နဲ့အထက်ရှိ ငလျင်လှုပ်တဲ့အကြိမ်ပေါင်း ၁.၄ သန်းအကြိမ်အနက်က
ငလျင်အကြိမ်ပေါင်း (၁၅) ကြိမ်ကသာ အဆင့်(၇) နဲ့အထက်စာရင်းထဲဝင်လို့
အဆင့် (၇) ကျမှသာ ငလျင်က ကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတာ၊
Onlyatiny portion —15 or so of the 1.4 million quakes that register above 2.0 — register at7or above, which the threshold foraquake being considered major [source: USGS]. The biggest quake in recorded history was the 9.5 quake that struck Chile in 1960. It killed nearly 1,900 people and caused about $4 billion in damage in 2010 dollars [source: USGS]. Generally, you won’t see much damage from earthquakes that register below4on the Richter scale.
Richter scale ratings are determined soon after an earthquake, once scientists can compare the data from different seismograph stations. Mercalli ratings, on the other hand, can’t be determined until investigators have had time to talk to many eyewitnesses to find out what occurred during the earthquake. Once they haveagood idea of the range of damage, they use the Mercalli criteria to decide on an appropriate rating.
South Dakota Geological Survey Richter Scale Graphic Representation
အင်ဂလန်က ကလေးအတွက် ငလျင်သင်တန်းဗီဒီယို
တနှစ်ကိုငလျင်အကြိမ် ၅ သိန်း ရှိပြီး၊လူတွေသတိပြုမိနိုင်တာက ငလျင်အကြိမ်က ၁ သိန်းသာ၊
အဲဒီသတိပြုမိတဲ့ငလျင်အငယ်စားတွေဟာCalifornia, Alaska, Turkey,… Italy, …Indonesia, New Zealand, Japanမှာဖြစ်ကြသော်လည်းဘယ်နေရာမဆိုဥပမာNew York, London, Australiaအပါအဝင်မှာလဲဖြစ်နိုင်ကြတာပါ၊
Larger earthquakes occur less frequently, the relationship being exponential; for example, roughly ten times as many earthquakes larger than magnitude4occur inaparticular time period than earthquakes larger than magnitude 5. In the (low seismicity)
United Kingdom, for example, it has been calculated that the average recurrences are: an earthquake of 3.7 – 4.6 every year, an earthquake of 4.7 – 5.5 every 10 years, and an earthquake of 5.6 or larger every 100 years.This is an example of the Gutenberg-Richter law.
What is the Richter scale? « The mishunderstanding…
How Things Work : How Does the Richter Scale Work? – YouTube
The Richter scale was developed by Charles Richter of the California Institute of Technology in 1935. It is also known as Richter magnitude scale. It is used to measure the intensity of the earthquake. A single number is assigned to quantify the amount of seismic energy released by an earthquake. This assignment is made after calculations using information gathered byaseismograph.
The magnitude isabase-10 logarithmic scale. In other words, when there isawhole number jump, it indicatesaten-fold increase in the magnitude of the earthquake. Therefore, an earthquake with6on the Richter scale is 10 times greater than an earthquake with5on the same. Therefore, the increase in intensity between an earthquake of5and7on the Richter scale is 100 times. Let us look atafew facts about earthquakes and their numbers on the Richter scale. For kids, this might prove to be useful in gauging the strength and fury of an earthquake.
There are other factors which also havearole to play for example, local surface and subsurface geologic conditions, etc. To explain this better, ifaparticular area has unstable ground, such as sand or clay, it is very likely to experience more noticeable effects in comparison to an area at an equal distance from the earthquake’s epicenter, but which has firm ground, like granite, marble, etc.
Magnitude of Earthquake on Richter Scale
The earthquake is not felt
Approximately, 8000 per day
Normally not felt, but recorded
Approximately 1000 per day
Normally felt, but rarely are any damages caused
Often felt indoor, with shaking of indoor items and rattling noises. Significant damage is not caused
Approximately 6200 per year
Major damage can be caused to poorly constructed buildings and little damage to well constructed buildings
Approximately 800 per year
It can be very destructive in areas as far as 160 kilometers from the epicenter in populated areas
Approximately 120 per year
It is known to cause severe damage over larger areas
Approximately 18 per year
It can cause severe damage in several hundred miles across
Approximately 1 per year
Devastating in areas for several thousands of miles
Approximately 1 per 20 years
Has never been recorded
Extremely low and cannot be estimated
“ကလေးတွေအတွက်Richter ရစ်တာပေကြိုးဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ” ဆိုတဲ့ဗီဒီယို
အဆင့် ၃.၄ ထက်ငယ် တာ က နှစ်စဉ် အကြိမ် ၈ သိန်းရှိပြီးငလျင်တိုင်းတဲ့
၃.၄ – ၄.၂ က နှစ်စဉ် အကြိမ် ၃ သောင်း ရှိပြီး အိမ်တွင်းမှာသိသာရုံပါ၊
၄.၃ – ၄.၈ က နှစ်စဉ် အကြိမ် ၄၈၀၀ ရှိပြီး လူတော်တော်များများကသတိထားမိကာ၊ပြူတင်းပေါက်များကလှုပ်လာတာပါ
၄.၉ – ၅.၄ က နှစ်စဉ် အကြိမ် ၁၄၀၀ ရှိပြီး လူတိုင်းသတိထားမိကာ၊ပန်ကန်ပြားကကွဲနိုင်တံခါးရိုက်လှုပ်ရှားလာ၊
၅.၅ – ၆.၁ က နှစ်စဉ် အကြိမ် ၅၀၀ ရှိပြီး အဆောက်အဦးအနည်းငယ်ပျက်စီးကာ၊ပလာစတာအက် အုဠ်ခဲကျလာတာ၊
၆.၂ – ၆.၉ က နှစ်စဉ် အကြိမ် ၁၀၀ ရှိပြီး အဆောက်အဦးတော်တော်ပျက်စီးကာ၊မီးခိုးခေါင်တိုင်ကျ၊အိမ်ကလှုပ်လာတာ၊
၇.၀ – ၇.၃ က နှစ်စဉ် ၁၅ ကြိမ်ရှိပြီး အဆောက်အဦးများစွာပျက်စီးကာ၊ တံတားတွေတွန့်လိမ်၊ နံရံတွေကွဲ၊အိမ်တွေပြိုနိုင်တာ၊
၇.၄ – ၇.၉ က နှစ်စဉ် ၄ ကြိမ် ရှိပြီး အလွန်အကျွန်ပျက်စီးကာ အဆောက်အဦးအများစုကပြိုကျတာ၊
အဆင့် ၈ အထက်ဆိုရင် ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ၁၀ နှစ် မှာ တခါသာဖြစ်ခါ၊
Scales for measuring earthquakes…
The Richter Scale is the best known scale for measuring the magnitude of earthquakes. The magnitude value is proportional to the logarithm of the amplitude of the strongest wave during an earthquake. A recording of 7, for example, indicatesadisturbance with ground motion 10 times as large asarecording of 6. The energy released by an earthquake increases byafactor of 30 for every unit increase in the Richter scale. The table below gives the frequency of earthquakes and the effects of the earthquakes based on this scale
These effects are assumingashallow earthquake inapopulated area. Earthquakes of large magnitude do not necessarily cause the most intense surface effects. The effect inagiven region depends toalarge degree on local surface and subsurface geologic conditions. An area of unstable ground (sand, clay, or other unconsolidated materials), for example, is likely to experience much more noticeable effects than an area equally distant from an earthquake’s epicentre but underlain by firm ground such as granite.
မှတ်သား ကူးယူ သွားပါတယ်နော်
ခေတ်သစ်ဘိုးတော်ဘုရာမင်းတရားကြီး (သို့မဟုတ်) ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကျန်လူသား သခင် Mobile says:
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ခေါင်းမူးလာလို့ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်တဲ့အခါမှ
ဖတ်ရအောင် ကူးယူလို့ပဲထားလိုက်ရပါကြောင်းဗျာ . . . . . .
တန်ဖိုးရှိတဲ့.. အသိပညာတွေအတွက် ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော..။
ငလျင်တဆင့်ဆီက… ရှေ့တဆင့်ရဲ့.. ၁၀ဆ ရှိတာလေး.. တိတိကျကျသိသွားတာနဲ့တင်.. တော်တော်တန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ…